Original lesikhumba cala nge clip Isikhumba swivel holster for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original lesikhumba cala nge clip Isikhumba swivel holster for BlackBerry 9320 / 9220 Curve
Perfect for the yokuphila ibhizinisi. The smartphone kuyoba nini, okuyisigaba sokuqala for umsebenzisi esebenzayo. Natural Ukwaluka abushelelezi lesikhumba olungokwemvelo eziyojatshulelwa abathandi yalesi material. It isekela magnetic BlackBerry ubuchwepheshe.
I-accessory ye ephumelela kunazo. It hhayi kuphela ivikela ifoni yakho kusuka kunoma iyiphi amathonya ezingezinhle zangaphandle, kodwa futhi ngokuphawulekayo kunciphisa amathuba nesenzakalo — yabo ngenxa clip eyizingqabavu ukuthi kuboshwa ekhoneni, ungakwazi njalo ngokuqiniseka ukugqoka idivayisi nabo, ngaphandle kokuzizwa iyiphi ukungakhululeki.
Kusetshenziswa uhlobo-ephaketheni cover, ihlanganisa ngokugcwele smartphone. On top kukhona ibhuloho kabanzi on kukazibuthe. Made of okuqotho, ngakho ikhava has a ukuthungwa yemvelo, ukubukeka okuqinile futhi ihlala isikhathi eside uhlukile. Ngaphakathi izicubu zomzimba ezithambile abushelelezi. Cover uphinda ukuma imodeli, ukuhlinzeka indawo ukhululekile ngaphakathi kulandzelana nekuhlunga tinsita.
Isikhumba swivel holster uphelele ukuphila ibhizinisi. The smartphone kuyoba nini, okuyisigaba sokuqala for umsebenzisi esebenzayo. Mboza ebusweni nge textured okuqotho "njengoba lesi": bushelelezi futhi kumnandi touch, eziyojatshulelwa abathandi lokhu material. logo Kubaziwe ohlangothini front okuyingxenye kuzokwenza BlackBerry yakho njalo liyabonakala.
Original lesikhumba cala nge clip Isikhumba swivel holster for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black (Black) ACC-46596-201 (HDW-46595-001) ●